adịghị adị mgbodo
ndina mgbabere uzo
Nkuku emem nkwado
Door mgbabere uzo
Hasps staple na sere
Adịghị adị mgbodo-YW01001
A Ụdị adị mgbodo-YW-01002
oké ọrụ shelf mgbodo-YW 01003
Adịghị adị mgbodo-YW-01022
Adịghị adị mgbodo-YW-01015
FGV drawer mmịfe-YW-02002
Haining YongWang Hardware Factory dị na China hardware mmepụta isi-Yan'guan, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Shanghai, n'ebe ọdịda anyanwụ nke Hangzhou. Ọ nwere adaba okporo ụzọ. Haining si surgent tides bụkwa nso. Anyị factory tumadi manufactures iche iche bolts, aka, n'akuku strut, na-adabere na ndị ọzọ di iche iche nke ngwaike. Ugbu a, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere waya ọnwụ, 8 nēgwe nri, planers na ndị ọzọ na-emeghe ebu equipments, otutu oru ike.
Tinye: Liannong Village, Yan'guan Town, Haining City, Zhejiang Province